सर्वश्रेष्ठ 24 वृश्चिक टैटू डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु - टैटू कला विचार
सर्वश्रेष्ठ 24 वृश्चिक टटटो डिजाइन आइडिया को लागि पुरुष र महिलाहरु
sonitattoo नोभेम्बर 14, 2016
टैटूको कुरा गर्दा तपाईं कस्तो साहसी हुन सक्नुहुन्छ? के तपाईंले मानिसहरूलाई बिच्छेदन टटुट लिनु भएको छ? बिरालो टटू धेरै मिथक, डर र भित्तिता को विचार पनि संग जोडिएको छ। तथापि, बिच्छो टटूले अधिक अर्थ राखेको छ किनकि धेरै मानिसहरूसँग यो ट्याटू लिने व्यक्तिहरूको फरक विचार छ।
वृश्चिक टटू अर्थ
# स्करपोरेट टटूले संसारको विभिन्न भागहरुबाट धेरै मानिसहरूलाई मतलब छ। टैटू प्रतीकात्मक छ र प्रायः प्राणीको व्यवहारमा आधारित छ। यसले पुरुष मा असाधारण र कामुकता को प्रकार को नृत्य को कारण हुन सक्छ जसलाई यो मिलन को समयमा बनाइन्छ। यो म्यान्सन द्वारा सर्जरी को प्रतिनिधित्व गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ र बिच्छेदन विभिन्न धर्महरु द्वारा विभिन्न चीजहरु को मतलब को उपयोग गरिन्छ, जसलाई प्रायः दुष्ट संग सम्बन्धित छ। यो सुरक्षाको अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र एक लडाकूले प्रतिनिधित्व गर्दछ।
क्यान्सर जीवित धेरै धेरै #tattoo को प्रयोग गर्न को लागि उनको क्यान्सर यात्रा को कहानी बताउन को लागि। विद्रोहीहरू वा यहाँका बाकसहरूले प्रायः ट्याटुको प्रयोगलाई देखाउनका लागि हेर्छन् जुन उनीहरु हुन्। बिच्छेटा ट्याटटोले प्रतिरोध र संघर्षको अर्थ राख्दा केहीले यसलाई संवेदनशील, सम्मानित समर्पित र वफादारीको रूपमा लिन्छ। टटू पनि जुनून, बिरुद्ध, लडाइँ, सहनशीलता, सुरक्षा, दृढता, बचाव, मृत्यु, वफादारी र दुष्टबारे कुरा गर्न सकिन्छ।
तपाईं निर्णय गर्नुहुन्छ के तपाईं आफ्नो बिच्छेदन टटू तपाईं मतलब छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका वृश्चिक टटूहरू छन् जुन # तपाईले रोज्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येकमध्ये तिनीहरूको अर्थ छ। तथापि, तपाईं केहि फरक अर्थ बुझ्न आफ्नो टैटूमा छुटाउन सक्नुहुनेछ।
केहि राज्यों र जिल्लाहरु अमेरिका मा पार्लर र टैटू कलाकारहरुलाई नियंत्रित गर्दै छन्। यद्यपि, यसको मतलब यो होइन कि टटू मिसिनहरु को किन्न को लागी एक को आफ्नो घर भित्र स्याही नहीं सका मार्फत
सुपर बिस्टरो टैटू
असिस्टाइल मेसिन र अनपेक्षित विशेषज्ञहरूबाट बिच्छेदन ट्याट्ट प्राप्त गर्न तपाईले, र शिल्पकारलाई सधैं खतरनाक अवस्थामा अपरिहार्य रोगहरू, उदाहरणका लागि, विशेष माइक्रोस्कोपिक जीवहरूले सिर्जना गरिएको हेपेटाइटिस वा छाला प्रदूषणलाई कम गर्न सक्छ। मार्फत
हात बिच्छेदन टटू
यसका लागी एक अर्काको संख्या बढ्दै गएको छ। त्यसो भए उनीहरु आफुलाई बिहे गर्न नसक्ने हो भने उनीहरु आफुले आफुलाई बिहे गरेकी छिन्। मार्फत
रंगीन बिच्छेदन टटू
यसको अर्थ यो बिच्छेदन टटुट छ? वर्षौंको दौडान, हामीले सयौं मानिसहरुलाई आफ्नो शरीर को सजाने को लागि यो बिच्छू टैटू को उपयोग गरिरहेको छ। सबैसँग बिच्छेदन टटू हेर्नको आफ्नै विशेष दृष्टिकोण छ। मार्फत
ब्याक बिorpion टैटू
हामी उनीहरूको काम पूरा गर्न बिच्छेद ट्याट्ट चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन दिन्छौं। एक साँचो नीलो कार्यालय पत्ता लगाउनुहोस् र भ्रमणको लागि अनुरोध गर्नुहोस् - पसललाई निर्दोष र सफा हुनुपर्छ। सुरक्षा प्रविधिहरूको बारेमा विशेषज्ञहरूसँग कुराकानीको बारेमा नम्र हुनुपर्दैन। मार्फत
पैर बिच्छेदन टैटू
केहि मनपर्यो केहि मानिसहरू, र यो केही चाय छैन कि आधार मा पूर्ण रूपमा उचित छ। केही दश वर्ष पहिले, यस प्रकारको शरीरको कार्यशक्ति साधारण जनतामा स्वीकार गरिएको थियो, र वास्तवमा ती व्यक्तिहरूले विद्रोहको रूपमा देखाए। मार्फत
क्यान्सर बिच्छेदन टटू
त्यसोभए, यो कि जस्तो लाग्न सक्छ, आजकल, सामान्य जनताले यसलाई तिरस्कार गर्न उदार उदारवादी बनाएको छ, तथापि अझै पनि धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन सबै समयको लागि जाँच गर्न अस्वीकार गरे। मार्फत
बिस्टरो टैटूहरू र भेदीहरू कुनैपनि समयमा भन्दा बढी सुरक्षित छन्, तर तपाईले एक खुशीको मालिकलाई पछि फर्केर अघि बढ्नुहुन्छ, यो तपाईंको काम पूरा गर्न आवश्यक छ। शरीर शिल्पकारहरूलाई छिटो धैर्यतापूर्वक पद्धति को लागी धारण गर्न को लागी भरोसा गरिन्छ। मार्फत
कंकाल बिच्छेदन टैटू
भलाई पद्धति पछि, बिच्छेदन टटू विशेषज्ञ र शरीर भेदीहरू आफूलाई र तिनीहरूका क्लाइन्टहरूलाई संक्रमण र सूक्ष्म जीवविज्ञानको दायराबाट बचाउँछन् जसले रोग लाग्न सक्छ। मार्फत
स्टार वृश्चिक टटू
बिरालो टाटाटोस सुई र छायांकित मसी सहित बनाइएको छालामा योजनाहरू छन्। "स्याही" प्राप्त गर्नु एक उल्लेखनीय छनौट हो। याद गर्नुहोस् कि एक बिस्टरो टटू सफलतापूर्वक सतत हुन्छ, र तथ्यको बावजूद यो एक बिस्कुट टटू हटाउन सम्भव छ, प्रक्रिया महंगा र उत्प्रेरित छ। मार्फत
जाडो बिच्छेदन टटू
भित्री डिजाइनको बिच्छेदन टटू
यो जस्तै एक ट्याटू डिजाइन उपेक्षा गर्न सकिँदैन। सुन्दरता र प्रभाव यो पहनेले मा बनाउँछ ऊ ठूलो बोल्छ। छवि स्रोत
छाती वृश्चिक टटू
पुरुषहरु को लागि वृश्चिक टैटू
यी दिन बिस्टरो टोटोटोहरू सामान्य हुन्छन् कि हामी यसलाई चार जना व्यक्तिमा लगभग एक मा देख्छौं। वृश्चिक चित्रहरू #art कार्य हुन् जुन धेरै चीजहरूको प्रतिनिधित्व गर्न र मानिसहरूलाई बारेमा कुरा गर्न प्रयोग गरिएको छ। धेरै मान्छे बिच्छेदन टैटू हुन पश्चाताप समाप्त भएको छ किनकी तिनीहरूले यसको लागि खेल्दैनन्। छवि स्रोत
वृश्चिक टटू फैशन र सामान को एक बन्यो जो हामी पुरुषहरु र महिलाहरु को शरीर मा देख्छन। सक्यो दिनहरू एक बिस्टरो टटू हुँदा ट्याबू मानिन्छ। संसारभरि, मानिसहरू सुन्दरता गम्भीर हुन्छन् र सन्देश बिस्कुट ट्याटुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। छवि स्रोत
सबैभन्दा शक्तिशाली बिच्छेदन टटू
उदाहरणका लागि लिनुहोस्, कसरी यो मनपर्छ एक प्यारा वृश्चिक टटूमा? यो एक बिस्टरो टटू हो जुन वर्षहरु मा एक प्रवृति भएको छ। हामीमध्ये धेरैले अचम्मलाग्दो कलाकार्यहरूको प्रशंसा गरेका छौ जुन हामीले हाम्रा शरीरका विभिन्न भागहरूमा हाल, अतीत र भविष्य पनि सम्झिनेछौं। छवि स्रोत
टटू को कला एक पुरानो कला प्रपत्र हो जुन मानव द्वारा सोचेको छ। यो कलाको लागि के प्रयोग गरिएको आधारमा अभिव्यक्ति वा विद्रोही कार्यको रूप हो। छवि स्रोत
लवजुङ वृश्चिक टटू
त्यहाँ पनि आभूषण को रूप को रूप मा टैटू को उपयोग गर्ने मान्छे हो। छवि स्रोत
एक बिस्कुट टटू को सुन्दरता मात्र यो सराहना गर्न सकिन्छ जब यो तपाईं मा सख्त स्याही छ। शरीर को भाग जहाँ तपाईंलाई बिच्छेदन टैटू को आवश्यकता छ। छवि स्रोत
गर्दन बिच्छेदन टटू
थप बिच्छेदन टाटोको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
टैग:बिस्कुट टटू ट्याटुहरू केटीहरूको लागि पुरुषहरूको लागि टैटू
हात्ती टटूसिंह टटटोहरूछाती टैटूहरूसबैभन्दा राम्रो साथी टैटूहरूसंगीत टैटूहरूचन्द्र टोटोटोपक्षी टैटूहरूहात टाटाटोसरिप टैटूटखने टैटूएंकर टैटूहरूmehndi डिजाइनप्यार टैटूहेनना टैटूप्यारा टैटूहरूबिल्ली ट्याटोओटोपस ट्याटूक्राउन टैटूहरूतीर टटूईगल ट्याटोयुगल टैटूहरूwatercolor टटूक्रस टैटूसूर्य टैटूहरूबहिनी टैटूहरूकम्पास टैटूगर्दन टैटूहरूगुलाब टैटूहरूपुरुषहरूको लागि टैटूतितली टैटूहरूफूल टैटूहरूबिस्कुट टटूआस्तीन टैटूहरूअनन्तता टटूFeather Tattooहात ट्याटोसआदिवासी टैटूहरूहृदय टटटोराशिफल चिन्ह ट्याटोहरूदूत टैटूआँखा टटूचेरी खिलौना टैटूट्याटुहरू केटीहरूको लागिkoi fish tattooटैटू विचारहरूकमल फूल टटूपैट टैटूहीरे टैटूज्यामितीय ट्याटुहरूफिर्ता ट्याटोहरू